GNU Anastasis, fampiharana backup avy amin'i GNU Taler | Avy amin'ny Linux
GNU Anastasis, fampiharana nomanin'ny GNU Taler
Andro maromaro lasa izay ny Tetikasa GNU dia namoaka ny fampidirana ny ny kinova fitsapana voalohany an'ny "GNU Anastasis", rindran-damina sy fampiharana fampiharana hanohana ny lakilen'ny encryption ary ny passcode azo antoka.
Ny tetikasa dia novolavolain'ny mpamorona ny rafitra fandoavam-bola GNU Taler ho valin'ny filàna fitaovana hamerenana ireo lakile very taorian'ny tsy fahombiazan'ny rafitra fitehirizana na noho ny fanadinoana ny teny miafina izay nahitana ny lakile.
Faly aho manambara ny kinova ho an'ny daholobe (alpha) v0.1.0 voalohany an'ny GNU Anastasis. GNU Anastasis dia lakile zaraina izay mitahiry ny fiainana manokana vahaolana backup ary fanarenana. Azonao atao ny mampiasa azy hizarana fitaovana lehibe amina mpamatsy maro ary alaivo ny lakilanao amin'ny alàlan'ny fanamarinana azy mpamatsy tsirairay hahazoana ny hetsika lehibe. Tsy mianatra na inona na inona ny mpanome momba ireo mpampiasa amin'ity fizotrany ity, afa-tsy mandritra ny fanarenana rehefa mianatra izy ireo fampahalalana kely indrindra takiana mba hanamarinana anao arakaraka ny fomba fanamarinana voafantina.
Ny hevi-dehibe amin'ilay tetikasa dia izany no lakile Mizara roa izy io, ary ny ampahany tsirairay dia voahidy sy ampiantranoin'ny mpamatsy fitehirizana tsy miankina. Tsy toy ny drafitra fanalahidy manan-danja izay misy serivisy na namana / fianakaviana voaloa, ny fomba naroso tao amin'ny GNU Anastasis dia tsy miankina amin'ny fahatokiana feno amin'ny fitehirizana na ny filà hahatadidy ny teny miafina sarotra nampiasana azy. Encrypt ny lakile. Ny fiarovana ny kopian'ny backup amin'ny alàlan'ny teny miafina dia tsy heverina ho vahaolana, satria ny teny miafina dia tsy maintsy tehirizina na tadidy ihany koa any ho any (ho very ny lakilena vokatry ny amnesia na ny fahafatesan'ny tompony).
Ny mpamatsy GNU Anastasis dia tsy afaka mampiasa ny lakile, satria ny ampahan'ny lakilena ihany no azonao idirana, ary ny manangona ireo singa fototra rehetra ho iray manontolo dia mila manamarina amin'ny mpamatsy tsirairay ianao amin'ny alàlan'ny fomba fanamarinana samihafa, fanamarinana tohanan'ny alàlan'ny SMS, mailaka, mandray taratasy amin'ny taratasy mahazatra, antso an-tsary, mahafantatra ny valin'ny fanontaniana miafina efa voafaritra sy ny fahaizana mamindra amin'ny kaonty banky efa voafaritra.
Ireo fanaraha-maso ireo dia manamafy fa ny mpampiasa dia manana alàlan'ny mailaka, nomeraon-telefaona ary kaonty any amin'ny banky, ary afaka mandray taratasy ihany koa amin'ny adiresy voalaza.
Rehefa mitahiry ny lakile, ny mpampiasa dia misafidy ireo mpamatsy sy ny fomba fanamarinana ampiasaina. Alohan'ny hamindrana ny angona ho an'ny mpamatsy, ny ampahany amin'ny lakile dia voahidy amin'ny fampiasa hash vita amin'ny valiny voalamina amin'ny fanontaniana isan-karazany mifandraika amin'ny mombamomba ny tompon'ny lakile (anarana feno, daty sy toerana nahaterahana, nomeraon-tsosialy, sns. ).
Ny mpamatsy dia tsy mahazo vaovao momba ireo mpampiasa izay anohanany, afa-tsy ny fampahalalana ilaina hanamarinana ny tompony. Ny vola iray dia mety aloa amin'ny mpivarotra ho an'ny fitehirizana (ny fanampiana ny fandoavam-bola toy izany dia efa nampiana ao amin'ny GNU Taler, saingy maimaim-poana ireo mpanolotra andrana roa). Mba hitantanana ny fizotry ny fanarenana, novolavolaina ny fampiasana sary miorina amin'ny tranomboky GTK.
Ny kaodin'ny tetikasa dia voasoratra ao amin'ny C ary zaraina ambanin'ny lisansa GPLv3.
Ahoana ny fametrahana GNU Anastasis amin'ny Linux?
Ho an'ireo izay liana te-hanandrana ity rindranasa ity dia azon'izy ireo atao ny misintona an'ity kinova andrana ity avy amin'ny tranokala ofisialiny avy amin'ity rohy manaraka ity ary amin'ny faran'ny fisintomana dia tsy maintsy mamaha ny fonosana ianao ary manangona ny kaody amin'ny rafitrao.
Na azonao atao koa ny manokatra terminal ary ao anatiny no soratanao ity baiko manaraka ity hampidina ny kinova ankehitriny (amin'ny fotoana anoratana):
Izao dia miroso amin'ny famandrihana azy izahay:
Miditra amin'ny lahatahiry vokatr'izany izahay ary miroso amin'ny fanangonana miaraka amin'ny:
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ilay tetikasa ianao dia afaka manatona ny antsipirihany amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GNU Anastasis, fampiharana nomanin'ny GNU Taler
Fikomiana, ny loharano misokatra amin'ny Discord
Hitan'izy ireo ny faharefoana ao amin'ny Ghostscript izay nohararaotina tamin'ny alàlan'ny ImageMagick